OPPO Reno2| Net Guide
Home Products Phones OPPO Reno 2
ပွီးခဲ့တဲ့ 2019 ခုနှဈ ဧပွီလလောကျကတညျးက OPPO ကနေ Reno series စမတျဖုနျးတှကေို ဆကျတိုကျထုတျလုပျပေးခဲ့ပါတယျ။ ၎င်းငျး Reno Series ဖုနျးတှအေကုနျလုံးက မကျြနှာပွငျကယျြပွနျ့ပွီး ကငျမရာစှမျးအား အထူးကောငျးမှနျတာကို တှရေ့ပါတယျ။ Reno Series ထဲမှာ နောကျဆုံးထှကျရှိထားတဲ့ စမတျဖုနျးကတော့ OPPO Reno2ပဲဖွဈပွီး ၎င်းငျးကို ပွီးခဲ့တဲ့ စကျတငျဘာလကမှ စတငျမိတျဆကျပေးခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။ အခုဆိုရငျ OPPO Reno2ကို မွနျမာနိုငျငံမှာ စတငျဝယျယူနိုငျနပေါပွီ။ ၎င်းငျးဖုနျးဟာ အရညျအသှေးမွငျ့စမတျဖုနျးတဈလုံးဖွဈပွီး စြေးနှုနျးကလညျး အနညျးငယျမွငျ့မားပါတယျ။ အားသာခကျြတှကေတော့ ဒီဇိုငျးပုံစံဆနျးသဈလှပခွငျး၊ မကျြနှာပွငျကွီးမားကယျြပွနျ့ခွငျး၊ ကငျမရာစှမျးအားကောငျးမှနျခွငျး၊ စကျစှမျးဆောငျရညျမွငျ့မားခွငျးတှအေပွငျ ဘကျထရီစှမျးအားလညျး ပွညျ့ဝမှုရှိတာကွောငျ့ အဘကျဘကျက ပွီးပွညျ့စုံမှုရှိတဲ့ စမတျဖုနျးတဈလုံးပဲ ဖွဈပါတယျ။
အရှဘေ့ကျမကျြနှာပွငျက အကွမျးခံတဲ့ Corning Glass6နဲ့ ဖုံးအုပျထားသလို နောကျကြောဘကျကိုတော့ Corning Glass5ကိုသုံးထားပွီး ဘေးဘောငျတှကေ အလူမီနီယံဘောငျတှေ ဖွဈပါတယျ။ အခုခတျေစားနတေဲ့ Motorized pop-up camera ကို တပျဆငျပေးထားပွီး တပျဆငျထားတဲ့ ဒီဇိုငျးပုံစံလေးကလညျး တခွား Pop-up camera တှနေဲ့ မတူပဲ ထူးခွားဆနျးသဈမှု ရှိပါတယျ။ နောကျကြောဘကျ အပျေါအလယျတညျ့တညျ့မှာ အနောကျ Camera4လုံးနဲ့ LED Flash မီးလုံးတို့ ဒေါငျလိုကျတညျရှိပါတယျ။ နောကျကြောဘကျအရောငျတှကေလညျး အတှဲအစပျအရောငျပွေးလေးတှနေဲ့မို့ တျောတျောလေးကို လှပဆနျးသဈမှု ရှိပါတယျ။ အရှဘေ့ကျက လုံးဝဘောငျပြောကျဒီဇိုငျးမို့ ကယျြပွနျ့တဲ့ မွငျကှငျးတှကေို ပွညျ့ပွညျ့ဝဝ အသုံးပွုနိုငျပါတယျ။ ဖုနျးအရှယျအစားက 160 x 74.3 x 9.5 mm (6.30 x 2.93 x 0.37 in) ရှိပွီး 189g လေးပါတယျ။
ဒါကွောငျ့ သာမနျဖုနျးတှထေကျ အနညျးငယျတော့ ပိုထူပါတယျ။ ၎င်းငျးကို GSM, HSPA နဲ့ LTE networks တှမှော အသုံးပွုနိုငျပွီး Hybrid Dual Nano SIM ဖွဈလို့ Nano SIM card2card ကို တဈပွိုငျနကျတညျး ထညျ့သုံးနိုငျပါတယျ။ မကျြနှာပွငျက 6.5-inch အကယျြရှိပွီး AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors display နဲ့ ပွုလုပျထားပါတယျ။ ၎င်းငျးမကျြနှာပွငျက 20:9 ratio မှာ 1080 x 2400 pixels စှမျးအားရှိတဲ့ မွငျကှငျးတှကေို ပွသနိုငျပါတယျ။ အထဲမှာတော့ နောကျဆုံးပျေါ Android 9.0 (Pie) ကို အခွခေံထားတဲ့ အဆငျ့မွငျ့ ColorOS 6.1 User Interface ကို run ပေးထားတဲ့အတှကျ သုံးစှဲရတာ အဆငျ့မွငျ့မားမှု ရှိပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ စကျစှမျးဆောငျရညျပိုငျးအတှကျလညျး အရညျအသှေးအလှနျမွငျ့မားတဲ့ chipset နဲ့ RAM 8GB ပါရှိတဲ့ အဆငျ့မွငျ့ processor တို့ကို ပံ့ပိုးပေးထားတဲ့အပွငျ ရုပျထှကျပိုငျးအတှကျလညျး အဆငျ့မွငျ့ဆုံး GPU ကို သုံးထားပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ဖုနျးလုပျဆောငျခကျြတှအေားလုံးက တိကလြငျြမွနျမှု ရှိပါတယျ။
ကငျမရာစှမျးဆောငျရညျပိုငျးအတှကျတော့ အနောကျကငျမရာက 48 MP, f/1.7, 26mm (wide), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF, OIS + 13MP, f/2.4, (telephoto), 1/3.4″, 1.0µm, PDAF + 8 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/3.2″, 1.4µm +2MP B/W, f/2.4, 1/5″, 1.75µm စှမျးအားတှပေါရှိပွီး Dual-LED flash, HDR, panorama ဆိုတဲ့ functions တှကေိုလညျး ထညျ့သှငျးပေးထားပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ အရှကေ့ငျမရာကလညျး Motorized pop-up 16 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.1″, 1.0µm စှမျးအားတှကေို ထောကျပံ့ပေးထားတာကွောငျ့ အရှကေ့ငျမရာရော အနောကျကငျမရာကပါ အရညျအသှေး အလှနျကောငျးမှနျတဲ့ ဓာတျပုံတှနေဲ့ ဗီဒီယိုတှကေို အကောငျးဆုံး ရိုကျကူးပေးနိုငျပါတယျ။ ဖုနျးလုံခွုံရေးပိုငျးအတှကျလညျး Fingerprint (under display) စနဈပါရှိလို့ စမတျကကြ အသုံးပွုနိုငျပါတယျ။ ၎င်းငျးဖုနျးကို ရှေးခယျြဝယျယူနိုငျမယျ့ အရောငျတှကေတော့ Luminous Black, Ocean Blue နဲ့ Sunset Pink ဆိုတဲ့ အမဲရောငျ၊ အပွာရောငျနဲ့ ပနျးရောငျ စုစုပေါငျး အရောငျ3မြိုးပဲ ဖွဈပါတယျ။
တညျဆောကျပုံဒီဇိုငျးက ကဈြကဈြလဈြလဈြနဲ့ တောငျ့တငျးခိုငျမာပွီး သဈလှငျတောကျပနတေဲ့ နောကျဆုံးပျေါ ကိုယျထညျဒီဇိုငျးကွောငျ့ ဆှဲဆောငျမှုလညျး ရှိပါတယျ။ အရှဘေ့ကျမကျြနှာပွငျက ကယျြပွနျ့ရှငျးလငျးမှုရှိသလို နောကျကြောဘကျကလညျး ခတျေမီဆနျးသဈမှု ရှိပါတယျ။
ဖုနျးစှမျးဆောငျရညျပိုငျးအတှကျ Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G (8 nm) chipset နဲ့ RAM 8GB ပါရှိတဲ့ Octa-core (2×2.2 GHz Kryo 470 Gold & 6×1.8 GHz Kryo 470 Silver) processor တို့ကို ပံ့ပိုးထားတာကွောငျ့ လငျြမွနျတိကတြဲ့ လုပျဆောငျခကျြတှကေို ပေးစှမျးနိုငျသလို ရုပျထှကျပိုငျးအတှကျလညျး အဆငျ့မွငျ့ Adreno 618 GPU ကို သုံးထားပါတယျ။
(3). Display and Camera
6.5-inch ကယျြတဲ့ မကျြနှာပွငျကို AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors display နဲ့ ပွုလုပျထားပွီး Full HD မွငျကှငျးစှမျးအားတှကေို အပွညျ့အဝ ရရှိနိုငျမှာပါ။ ၎င်းငျးမှာ Quad 48MP + 13MP + 8MP + 2MP ရှိတဲ့ အနောကျကငျမရာနဲ့ 16MP ရှိတဲ့ အရှေ့ selfie ကငျမရာတို့ကို တပျဆငျထားပွီး အလှနျအသုံးဝငျတဲ့ features တှလေညျး ပါရှိပါတယျ။
OPPO Reno2စမတျဖုနျးဟာ တကယျ့အရညျအသှေးမွငျ့ ကငျမရာဖုနျးတဈလုံးဖွဈပွီး ဒီဇိုငျးပိုငျးမှာရော စကျစှမျးဆောငျရညျပိုငျးမှာပါ အကောငျးဆုံး User Experiences တှကေို ပေးစှမျးနိုငျတာကွောငျ့ ပေးရတဲ့စြေးနှုနျးနဲ့ သုံးစှဲရတာ ထိုကျတနျမှု ရှိပါတယျ။
(5). Battery Life
ဘကျထရီစှမျးအားအနနေဲ့တော့ Non-removable Li-Po 4000 mAh battery ကို ထညျ့သှငျးပေးထားလို့ လုပျဆောငျခကျြတှေ တျောတျောမြားမြားကို အခြိနျကွာမွငျ့စှာ ပွုလုပျနိုငျမှာပါ။ ဒါ့အပွငျ ဖုနျးအားသှငျးမွနျဆနျတဲ့ Fast battery charging 20W (VOOC Flash Charge 3.0) စနဈလညျး ပါရှိပါသေးတယျ။
» Network : GSM/HSPA/LTE (Hybrid Dual SIM)
» Weight : 189 g
» Display : 6.5″, AMOLED capacitive touchscreen
» Resolution : 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~401 ppi)
» Dimensions : 160 x 74.3 x 9.5 mm
» Memory : 256GB, 8GB RAM
» Camera : Quad 48MP, f/1.7, 1/2.0″, 0.8µm, 13MP, f/2.4, 1/3.4″, 1.0µm PDAF, 8MP, f/2.2, 13mm, 1/3.2″, 1.4µm, 2MP B/W, f/2.4, 1/5″, 1.75µm, Dual-LED flash, HDR, panorama, Selfie : Motorized pop-up 16Mp, f/2.0
» OS : Android 9.0 (Pie); ColorOS 6.1
» Chipset : Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G
» CPU : Octa-core (2×2.2 GHz Kryo 470 Gold & 6×1.8 GHz Kryo 470)
» GPU : Adreno 618
» Sensor : Fingerprint (Under-dispaly optical), accelerometer
» Price : 799,900 Ks
» Contact Phone : 09-785222888 (Win Mobile World)
ပြီးခဲ့တဲ့ 2019 ခုနှစ် ဧပြီလလောက်ကတည်းက OPPO ကနေ Reno series စမတ်ဖုန်းတွေကို ဆက်တိုက်ထုတ်လုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ၎င်း Reno Series ဖုန်းတွေအကုန်လုံးက မျက်နှာပြင်ကျယ်ပြန့်ပြီး ကင်မရာစွမ်းအား အထူးကောင်းမွန်တာကို တွေ့ရပါတယ်။ Reno Series ထဲမှာ နောက်ဆုံးထွက်ရှိထားတဲ့ စမတ်ဖုန်းကတော့ OPPO Reno2ပဲဖြစ်ပြီး ၎င်းကို ပြီးခဲ့တဲ့ စက်တင်ဘာလကမှ စတင်မိတ်ဆက်ပေးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုဆိုရင် OPPO Reno2ကို မြန်မာနိုင်ငံမှာ စတင်ဝယ်ယူနိုင်နေပါပြီ။ ၎င်းဖုန်းဟာ အရည်အသွေးမြင့်စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်ပြီး ဈေးနှုန်းကလည်း အနည်းငယ်မြင့်မားပါတယ်။ အားသာချက်တွေကတော့ ဒီဇိုင်းပုံစံဆန်းသစ်လှပခြင်း၊ မျက်နှာပြင်ကြီးမားကျယ်ပြန့်ခြင်း၊ ကင်မရာစွမ်းအားကောင်းမွန်ခြင်း၊ စက်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားခြင်းတွေအပြင် ဘက်ထရီစွမ်းအားလည်း ပြည့်ဝမှုရှိတာကြောင့် အဘက်ဘက်က ပြီးပြည့်စုံမှုရှိတဲ့ စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အရှေ့ဘက်မျက်နှာပြင်က အကြမ်းခံတဲ့ Corning Glass6နဲ့ ဖုံးအုပ်ထားသလို နောက်ကျောဘက်ကိုတော့ Corning Glass5ကိုသုံးထားပြီး ဘေးဘောင်တွေက အလူမီနီယံဘောင်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုခေတ်စားနေတဲ့ Motorized pop-up camera ကို တပ်ဆင်ပေးထားပြီး တပ်ဆင်ထားတဲ့ ဒီဇိုင်းပုံစံလေးကလည်း တခြား Pop-up camera တွေနဲ့ မတူပဲ ထူးခြားဆန်းသစ်မှု ရှိပါတယ်။ နောက်ကျောဘက် အပေါ်အလယ်တည့်တည့်မှာ အနောက် Camera4လုံးနဲ့ LED Flash မီးလုံးတို့ ဒေါင်လိုက်တည်ရှိပါတယ်။ နောက်ကျောဘက်အရောင်တွေကလည်း အတွဲအစပ်အရောင်ပြေးလေးတွေနဲ့မို့ တော်တော်လေးကို လှပဆန်းသစ်မှု ရှိပါတယ်။ အရှေ့ဘက်က လုံးဝဘောင်ပျောက်ဒီဇိုင်းမို့ ကျယ်ပြန့်တဲ့ မြင်ကွင်းတွေကို ပြည့်ပြည့်ဝဝ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ဖုန်းအရွယ်အစားက 160 x 74.3 x 9.5 mm (6.30 x 2.93 x 0.37 in) ရှိပြီး 189g လေးပါတယ်။
ဒါကြောင့် သာမန်ဖုန်းတွေထက် အနည်းငယ်တော့ ပိုထူပါတယ်။ ၎င်းကို GSM, HSPA နဲ့ LTE networks တွေမှာ အသုံးပြုနိုင်ပြီး Hybrid Dual Nano SIM ဖြစ်လို့ Nano SIM card2card ကို တစ်ပြိုင်နက်တည်း ထည့်သုံးနိုင်ပါတယ်။ မျက်နှာပြင်က 6.5-inch အကျယ်ရှိပြီး AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors display နဲ့ ပြုလုပ်ထားပါတယ်။ ၎င်းမျက်နှာပြင်က 20:9 ratio မှာ 1080 x 2400 pixels စွမ်းအားရှိတဲ့ မြင်ကွင်းတွေကို ပြသနိုင်ပါတယ်။ အထဲမှာတော့ နောက်ဆုံးပေါ် Android 9.0 (Pie) ကို အခြေခံထားတဲ့ အဆင့်မြင့် ColorOS 6.1 User Interface ကို run ပေးထားတဲ့အတွက် သုံးစွဲရတာ အဆင့်မြင့်မားမှု ရှိပါတယ်။ ဒါ့အပြင် စက်စွမ်းဆောင်ရည်ပိုင်းအတွက်လည်း အရည်အသွေးအလွန်မြင့်မားတဲ့ chipset နဲ့ RAM 8GB ပါရှိတဲ့ အဆင့်မြင့် processor တို့ကို ပံ့ပိုးပေးထားတဲ့အပြင် ရုပ်ထွက်ပိုင်းအတွက်လည်း အဆင့်မြင့်ဆုံး GPU ကို သုံးထားပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဖုန်းလုပ်ဆောင်ချက်တွေအားလုံးက တိကျလျင်မြန်မှု ရှိပါတယ်။
ကင်မရာစွမ်းဆောင်ရည်ပိုင်းအတွက်တော့ အနောက်ကင်မရာက 48 MP, f/1.7, 26mm (wide), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF, OIS + 13MP, f/2.4, (telephoto), 1/3.4″, 1.0µm, PDAF + 8 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/3.2″, 1.4µm +2MP B/W, f/2.4, 1/5″, 1.75µm စွမ်းအားတွေပါရှိပြီး Dual-LED flash, HDR, panorama ဆိုတဲ့ functions တွေကိုလည်း ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အရှေ့ကင်မရာကလည်း Motorized pop-up 16 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.1″, 1.0µm စွမ်းအားတွေကို ထောက်ပံ့ပေးထားတာကြောင့် အရှေ့ကင်မရာရော အနောက်ကင်မရာကပါ အရည်အသွေး အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ ဓာတ်ပုံတွေနဲ့ ဗီဒီယိုတွေကို အကောင်းဆုံး ရိုက်ကူးပေးနိုင်ပါတယ်။ ဖုန်းလုံခြုံရေးပိုင်းအတွက်လည်း Fingerprint (under display) စနစ်ပါရှိလို့ စမတ်ကျကျ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ၎င်းဖုန်းကို ရွေးချယ်ဝယ်ယူနိုင်မယ့် အရောင်တွေကတော့ Luminous Black, Ocean Blue နဲ့ Sunset Pink ဆိုတဲ့ အမဲရောင်၊ အပြာရောင်နဲ့ ပန်းရောင် စုစုပေါင်း အရောင်3မျိုးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
တည်ဆောက်ပုံဒီဇိုင်းက ကျစ်ကျစ်လျစ်လျစ်နဲ့ တောင့်တင်းခိုင်မာပြီး သစ်လွင်တောက်ပနေတဲ့ နောက်ဆုံးပေါ် ကိုယ်ထည်ဒီဇိုင်းကြောင့် ဆွဲဆောင်မှုလည်း ရှိပါတယ်။ အရှေ့ဘက်မျက်နှာပြင်က ကျယ်ပြန့်ရှင်းလင်းမှုရှိသလို နောက်ကျောဘက်ကလည်း ခေတ်မီဆန်းသစ်မှု ရှိပါတယ်။
ဖုန်းစွမ်းဆောင်ရည်ပိုင်းအတွက် Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G (8 nm) chipset နဲ့ RAM 8GB ပါရှိတဲ့ Octa-core (2×2.2 GHz Kryo 470 Gold & 6×1.8 GHz Kryo 470 Silver) processor တို့ကို ပံ့ပိုးထားတာကြောင့် လျင်မြန်တိကျတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို ပေးစွမ်းနိုင်သလို ရုပ်ထွက်ပိုင်းအတွက်လည်း အဆင့်မြင့် Adreno 618 GPU ကို သုံးထားပါတယ်။
6.5-inch ကျယ်တဲ့ မျက်နှာပြင်ကို AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors display နဲ့ ပြုလုပ်ထားပြီး Full HD မြင်ကွင်းစွမ်းအားတွေကို အပြည့်အဝ ရရှိနိုင်မှာပါ။ ၎င်းမှာ Quad 48MP + 13MP + 8MP + 2MP ရှိတဲ့ အနောက်ကင်မရာနဲ့ 16MP ရှိတဲ့ အရှေ့ selfie ကင်မရာတို့ကို တပ်ဆင်ထားပြီး အလွန်အသုံးဝင်တဲ့ features တွေလည်း ပါရှိပါတယ်။
OPPO Reno2စမတ်ဖုန်းဟာ တကယ့်အရည်အသွေးမြင့် ကင်မရာဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်ပြီး ဒီဇိုင်းပိုင်းမှာရော စက်စွမ်းဆောင်ရည်ပိုင်းမှာပါ အကောင်းဆုံး User Experiences တွေကို ပေးစွမ်းနိုင်တာကြောင့် ပေးရတဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ သုံးစွဲရတာ ထိုက်တန်မှု ရှိပါတယ်။
ဘက်ထရီစွမ်းအားအနေနဲ့တော့ Non-removable Li-Po 4000 mAh battery ကို ထည့်သွင်းပေးထားလို့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေ တော်တော်များများကို အချိန်ကြာမြင့်စွာ ပြုလုပ်နိုင်မှာပါ။ ဒါ့အပြင် ဖုန်းအားသွင်းမြန်ဆန်တဲ့ Fast battery charging 20W (VOOC Flash Charge 3.0) စနစ်လည်း ပါရှိပါသေးတယ်။
Previous articleOLED Punch-hole display သုံးထားတဲ့ Vivo S5 စမတျဖုနျး
Next articleSamsung Galaxy A80